Keen khudaar cusub dadka waayeelka ah adigoo beeraya wax yar oo dheeraad ah sanadkan - Cunnooyinka on Wheels
Keen khudradda cusub waayeelka adoo beeraya wax yar oo dheeraad ah sannadkan
Haddii aad weydiisato Joy, macmiilka Cunnada ee Wheels ee St. Paul, ma jiraan wax adduunka ka jira oo la barbardhigayo dhadhanka yaanyo dhowaan la soo xulay oo ka baxsan beerta.
"Waxay leeyihiin dhadhan noocan oo kale ah," ayay tiri. "Ma jiro wax isbarbardhigaya waxa aad ka heli lahayd dukaanka."
Joy malahan beer iyada u gaar ah, laakiin yaanyada cusub iyo khudradda kale waxaa la siiyaa iyada oo cuntadeeda laga helo Galbeedka 7aad ee Cuntada ee Goobta Wheels ee ku taal St. Paul inta lagu jiro xilliga koritaanka. Khudaarta waxaa laga soo qaadaa maalinta loogu dhiibayo macaamiisha meelaha beerta ku yaal banaanka hore ee Xarunta Bulshada ee West 7th, halkaas oo tabaruceyaashu ay ka soo qaadaan cuntooyin loo geeyo macaamiisha.
Ogaanshaha in macaamiil badan sida Joy aysan fursad u helin inay soo saaraan wax soo saar cusub, tiro ka mid ah Cuntooyinka ku yaal goobaha Wheels ayaa horumarinaya ama ballaarinaya barnaamijyo u siiya macaamiishooda wanaagga beerta. Barnaamijyadan waxay qaadanayaan Cunnada 'Wheels' sida ay uga go'an tahay bixinta cunno nafaqo leh tallaabo dheeraad ah - sannadkanna waxaad ku caawin kartaa adoo ku deeqaya wax soo saarka beertaada. Beeralayda maxalliga ah waxay ugu deeqi karaan wax soo saarkooda dheeraadka ah Cuntada Cuntada ee CEAP xagaagan iyadoo loo marayo barnaamijyadooda cusub ee Salads ee Waayeelka.
CEAP, oo ka shaqeysa shelf shelf iyo Meals on goobta xaafadaha Wheels oo u adeegta Brooklyn Center, Brooklyn Park, iyo xaafada waqooyiga Camden ee Minneapolis, waxay ku siisaa wax soo saar cusub shelf shelf iyada oo loo marayo Mashruuc Beerista Beerta. Sannadkan, dooro Meals on Wheels macaamiisha waxay heli doonaan saladhyo si hufan loo baakadeeyey waxayna isticmaalaan khudaar loogu deeqay CEAP.
Clag Brumback, COO & Agaasimaha Horumarinta ee CEAP, oo ka caawinaya mashruuca ayaa yiri: "Khudaarta waxay ku ridayaan dambiil yar oo fiican, oo ay weheliyaan kaar." "Waxay u egtahay mid quruxsan."
Dadka bannaanka u jooga waxay ku deeqi karaan nooc kasta oo khudradda ka mid ah oo si fiican ugu dhex socon kara salad, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn cagaarka, qajaarka, yaanyada, karootada iyo raashiinka. CEAP waxay si fudud u weydiisaneysaa in tabarucaadka la calaamadeeyay, xaalad wanaagsan oo aysan ka jirin cayayaanka.
Deeqaha waxaa lagu dejin karaa barta Shelf cuntada CEAP (7051 Brooklyn Blvd., Brooklyn Center) iyo deeq-bixiyeyaashu waxay si fudud u qeexi karaan in loogu talagalay barnaamijka Salads ee Waayeelka. Saacadaha tabarucaadu waa 8 subax-4: 30 pm Isniinta, Talaado iyo Jimco iyo 8 am-8 pm Arbaco iyo Khamiis.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan barnaamijka, kala xiriir Samantha Grover taleefanka 612-812-3721 ama [email protected]. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Mashruuca Goosashada Beerta iyo ururada kaqeyb gala waxaad ka heli kartaa gardgleaning.org.
Abriil 22, 2014